Yoke | Радоје Домановић
Tag Archive | Yoke
Ezigbo ihe ijuanya na-eme n’ụwa a, obodo anyị bu , dịka ọtụtụ ndị na-ekwu, juputara na ihe ịtụnanya ruo n’ókè nke na ihe ịtụnanya abụghịzị ihe ịtụnanya. Enwere ndị nọ ebe a nọ n’ọkwa dị elu nke na-echeghị ma ọlị, yana dị ka ụgwọ, ma ọ bụ ikekwe n’ihi ihe ndị ọzọ, ehi nkịtị nke nkịtị, nke dị iche na nke ndị Serbia ndị ọzọ, malitere iche echiche. Chineke maara ihe merenụ nke mere anụmanụ a dị aghụghọ ji anwa ịnwa ụdị mbọ a, ọkachasị ebe ọ bụ na egosila na ọrụ ọjọọ a na Serbia nwere ike wetara gị mkparị. Ka anyị kwuozie na ekwensu a dara ogbenye, amaghi ya niile, amaghịdị na mbọ a abaghị uru n’ala nna ya, yabụ na anyị agaghị eji obi ike obodo ọ bụla were ya. Mana ọ ka bụ ihe omimi ihe mere ehi kwesịrị iche echiche ebe ọ bụ na ọ bụghị onye ntuli aka, ma ọ bụ onye ńdu, ma ọ bụ onye ọka ikpe, a họpụtabeghịkwa ya onye osote na ọgbakọ obodo ọ bụla, ma ọ bụ ọbụlagodi (ọ bụrụ na ọ ruru afọ ụfọdụ) onye nnochite. Ọ bụrụkwa na mkpụrụ obi dara ogbenye nwere nrọ nke ịbụ onye onye ozi steeti na obodo ọ bụla, ọ kwesịrị ịma na, n’ụzọ megidere nke ahụ, ọ kwesịrị ịdị na-eme otu esi eche echiche dị ka o kwere mee, dị ka ezigbo ndị ozi ahụ na mba ụfọdụ nwere obi ụtọ, n’agbanyeghị na anyị obodo enwechaghịkwa ihu ọma na nke a. N’ikpeazụ, gịnị kpatara anyị ga-eji nwee nchegbu maka ihe kpatara oke ehi na Serbia ji mee mbọ ndị mmadụ gbahapụrụ? Ọzọkwa, ọ nwere ike mee na ọ malitere iche echiche naanị n’ihi ebumpụta ụwa nke ya.
Yabụ, kedu ụdị oke ehi ọ bụ? Ehi nkịtị nke nwere, dịka ihe ọmụmụ ụmụ anụmanụ na-akụziri anyị, isi, ahụ na aka na ụkwụ, dị ka ehi ndị ọzọ niile; ọ na-adọkpụ ụgbọ ịnyịnya, na-ata ahịhịa, na-ata nnu, na-enwu enwu. Aha ya bụ Sivonja, ehi isi awọ.
Lee ka o si malite iche echiche. Otu ụbọchị nna ya ukwu jikọtara ya na enyi ya, Galonja, kwakọba ngwongwo ezuru ezu n’ụgbọ ala wee buga ha n’obodo ka ha ree.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo ọ batara n’obodo ahụ, ọ rere Sịkoja na enyi ya, na-ejikọghị ya, kegide agbụ nke jikọtara ha na yoke, tụba n’ihu ya mkpo ahịhịa, wee jiri ọńụ banye n’otu obere ụlọ mmanya iji were ume ihe ọnụnụ ole na ole. Enwere mmemme na-aga n’ihu n’obodo ahụ, yabụ na enwere ndị nwoke, ụmụ nwanyị na ụmụaka si n’akụkụ niile na-agafe. Galonja, ma ọ bụghị nke ehi ndị ọzọ mara dị ka onye ogbi, eleghị ihe ọ bụla anya, kama nke ahụ, ọ dabere na nri ehihie ya nke ukwuu, rie afọ, rie ntakịrị ihe na-atọ ụtọ, wee dinara ala, na-ehi ụra nke ọma. Ndị ahụ niile na-agafe agafe anaghị echegbu ya. Ọ na-ehi ụra ma na-enwu n’udo (ọ bụ ihe nwute na ọ bụghị mmadụ, yana amụma ndị a niile maka ọrụ dị elu). Mana Sivonja enweghị ike ịta otu ntakịrị. Anya nrọ ya na ihu mwute dị n’ihu ya gosiri na nlele mbụ na nke a bụ onye na-eche echiche, na mkpụrụ obi na-atọ ụtọ. Ndị mmadụ, ndị Serbia, na-agafe ya, na-enwe nganga maka ịdị ebube ha gara aga, aha ha, mba ha, na nganga a na-egosi n’omume ha siri ike. Sivonja hụrụ ihe ndị a niile, na mkpụrụ obi ya nọ na mberede na-eru uju na ihe mgbu n’ihi oke ikpe na-ezighị ezi, ọ nweghịkwa ike kama ịdaba na mmetụta dị ike, na mberede na ike; ọ na-ebe ákwá dị mwute, na-egbu mgbu, anya mmiri na-agbapụta n’anya ya. Na oke mgbu ya, Sivonja malitere iche:
– Kedu ihe nna m ukwu na ndị obodo ya, ndị Serbia, ji anya isi? Gịnị mere ha ji bulie isi ha elu wee lee ndị m anya mpako na nlelị anya? Ha na-anya isi n’ala nna ha, na-anya isi na akara aka ebere nyere ha ohere ịmụ ha ebe a na Serbia.
Nne m mụrụ m ebe a na Serbia, Serbia abụghịkwa ala m kamakwa nke nna m, na ndị nna nna m nwere, dị ka nke ha, ha niile, na-abịa n’ala ndị a site n’ala nna ochie Slavic. Ma ọ nweghị onye n’ime anyị bụ oke ehi nke nwere nganga na ya, naanị ihe anyị nwere bụ nganga na anyị nwere ike ịdọrọ ibu dị arọ n’elu; ruo taa, oke ehi agwabeghị ehi Jaman: “Gịnị ka ị chọrọ n’aka m, abụ m ehi Serbia, ala nna m bụ obodo mpako Serbia, a mụrụ nwa nna nna m niile ebe a, na ebe a, n’ala a, bụ ili nna nna m hà.” Chukwu ekwela, anyị emeghị nganga na nke a, ọ gbabeghị anyị n’uche, na ha na-anya isi na nke ahụ. Ndi mmadu di egwu!
N’ịbụ ndị echiche ndị a na-eche, oke ehi ahụ furu isi ya n’ụzọ dị mwute, mgbịrịgba n’olu na-ada ụda na mgbu na-ada. Galonja mepere anya ya, lelee enyi ya anya, wee maa jijiji:
– N’ebe ahụ ị ga-eji ihe nzuzu nke gị gaa ọzọ! Rie, onye nzuzu, maa abụba, lee ọgịrịga gị niile na-apụ apụ; ọ bụrụ na ọ dị mma iche, ndị mmadụ agaraghị enye anyị ehi. Ọ nweghị ụzọ anyị ga-esi nwee ihe ndabara ọma!
Sivonja nwere ọmịiko lee enyi ibe ya anya, wepụ isi ya n’ebe ọ nọ, wee mikpuru n’ime uche ya.
– Ha na-anya isi na ebube ha gara aga. Ha nwere ubi Kosovo, agha Kosovo. Nnukwu ihe, ndị nna nna m ebuteghị ụgbọ ala nri na ngwa agha ọbụna n’oge ahụ? Ọ bụrụ na ọ bụghị maka anyị, ndị mmadụ gaara eme ya n’onwe ha. Mgbe ahụ enwere ọgba aghara megide ndị Turkey. Nnukwu mgbalị dị mma, mana onye nọ ebe ahụ n’oge ahụ? Ọ bụ ntụpọ ndị a nwere imi dị elu, na-ama jijiji n’ihu m dị ka a ga-asị na ọ bụ uru ha, onye kpalitere ọgba aghara ahụ? Lee, were nna m ukwu dịka ọmụmaatụ. Ya onwe ya kwa dị mpako ma na-etu ọnụ maka ọgba aghara ahụ, ọkachasị na nna nna ya nwụrụ na agha ntọhapụ dịka ezigbo dike. Na nke a ọ bụ uru nna m ukwu? Nna nna nna ya nwere ikike ịdị mpako, mana ọ bụghị ya; nna nna ya nwụrụ ka nna m ukwu, nwa ya, nwere ike nwere onwe ya. O nwerela onwe ya, kedu ka o si eme nnwere onwe ya? Ọ na-ezuru nkata ndị ọzọ, na-anọdụ na ụgbọ ala, m ga-adọta ya na nkata mgbe ọ na-arahụ ụra. Ugbu a, o rewo nkata ya, ọ na -ańu mmanya, na emeghị ihe ọ bụla ma na-anya isi na ndụ ebube ya gara aga. Olekwa ndị nna nna m ole ka egburu na mbuso agha ahụ iji nye ndị na-alụ ọgụ nri?
Ọ bụ na ndị nna nna m n’oge ahụ ewepụtaghị ngwa agha, egbe ala, nri, mgbọ? Ma anyị anaghị anya isi maka ihe ọma ha n’ihi na anyị agbanwebeghị; anyị ka na-arụ ọrụ anyị taa, dịka nna nna anyị hà mere, jiri ndidi na akọ na uche.
Ha nwere nganga nhụjuanya nke ndị nna nna ha na narị afọ ise nke ịgba ohu. Ndị ikwu m atawo ahụhụ n’oge ndụ anyị niile, ma taa anyị ka na-ata ahụhụ ma bụrụ ohu, mana anyị anaghị eti mkpu banyere ya n’olu dara ụda.
Ha na-ekwu na ndị Turkey tara ahụhụ, gbuo ma kpọgbuo ha; ọ dị mma, ma ndị Serbia ma ndị Turkey gburu ma ndị nna nna m, ma tedara n’ọkụ, ma tinye ụdị mmekpa ahụ niile.
Ha na-anya isi n’okpukpe ha, ma ha ekwetaghị ihe ọ bụla. Kedu ihe kpatara m na ndị m na anyị enweghị ike ịnabata n’etiti Ndị Kraịst? Okpukpe ha na-agwa ha “ezula ohi” na ebe ahụ ka nna m ukwu na-ezu ohi ma na-ańụ mmanyamaka ego o nwetara maka izu ohi. Okpukpe ha na-agwa ha ka ha hụ ndị agbata obi ha n’anya, n’agbanyeghị nke ahụ, ha na-eme ibe ha ihe ọjọọ. Maka ha, ụmụ nwoke kacha mma, ihe atụ nke omume ọma, bụ onye na-anaghị eme ihe ọjọọ, na n’ezie, ọ nweghị onye na-eche na ọ na-arịọ onye ọ bụla ka o mee ihe ọma, ewezuga ime ihe ọjọọ. Nke ahụ bụ etu ha siri dị ala na ihe atụ nke omume ọma ha karịrị ihe ọ bụla na-abaghị uru nke na-adịghị emerụ ahụ.
Ehi ahu kuru ume nke ukwuu, ume welikwara ájá dị n’ụzọ.
– Yabụ – ehi ahụ gara n’ihu n’echiche ọjọọ ya – na nke a, ọ bụ na mụ na ndị ikwu m adịghị mma na ihe niile karịa nke ọ bụla n’ime ha? Enwetụbeghị m onye ọnye mgburu, ọ dịbeghị mgbe m katọrọ onye ọ bụla, ezughịbeghi ihe ọ bụla, achụpụghị onye aka ya dị ọcha na ọrụ ọha, emepụtaghị mpepu ego n’ụlọ akụ steeti, ekwuputaghị mfu adịgboroja, Ọ dịtụbeghị mgbe m tụrụ ụdọ ma ọ bụ nwụchie ndị aka ha dị ọcha, emebeghị m nkwutọ ndị enyi m, emebeghị m ihe megidere ụkpụrụ ehi m, emeghị m akaebe ụgha, abụghị m onye ozi steeti ma ọ nweghị mgbe m merụrụ obodo ahụ, ọ bụghị naanị na emeghị m ihe ọjọọ ọ bụla, ọbụna m na-emere ndị na-emegbu m ihe ọma. Nne m mụrụ m, ozugbo ahụ, ndị ajọ mmadụ nwedịrị ike nara m mmiri ara nne m. Ọ dịkarịa ala, Chineke kere anyị ahịhịa maka ehi, ọ bụghị maka mmadụ, mana ha na-anapụkwa anyị ya. Agbanyeghị, ewezuga iti ihe a niile, anyị na-adọkpụ ụgbọ ala ụmụ nwoke, na-akọ ubi ha ma na-enye ha nri. Ma na onweghị onye na-anabata uru anyị na-eme maka ala nna…
– Ma ọ bụ were ibu ọnụ dị ka ihe atụ; ọ dị mma, nye ndị mmadụ, okpukperechi n-agwa ka a na-ebu ọnụ n’ụbọchị oriri niile, mana ha achọghịdị ịnagide obere ibu ọnụ a, ebe mụ na ndị m na-ebu ọnụ na ndụ anyị niile, kemgbe anyị bufere ara na ara nne anyị.
Anụ ehi gbadara isi ya dị ka a ga-asị na ọ na-echegbu onwe ya, wee bulie ya ọzọ, were iwe, o yikwara ka ihe dị mkpa na-abịaghachikwute ya, na-emekpa ya ahụ; na mberede, ọ tiri mkpu ọnụ:
– Eh, ama m ugbu a, ọ ga-abụrịrị – ọ gara n’ihu na-eche, – nke ahụ bụ ihe ọ bụ; ha na-anya isi maka nnwere onwe na ikike obodo. Ọ dị m mkpa itinye uche m na ya nke ọma.
Ọ nọ na-eche, na-eche, mana enweghị ike ịpụta ya.
– Kedu ikike ndị a ha nwere? Ọ bụrụ na ndị uwe ojii nyere ha iwu ịme ntuli aka, ha na-eme ntuli aka, na dịka nke a, anyị nwere ike ime ngwa ngwa: “Ekw-e-e-m!” Ma ọ bụrụ na enyeghị ha iwu, ha agaghị anwa ịtụ aka, ma ọ bụ tinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, dị ka anyị. A na-akụkwa ha ihe n’ụlọ mkpọrọ, ọ bụrụgodị na aka ha dị ọcha. Ma ọ dịkarịa ala, anyị na-afụ ma na-efegharị ọdụ anyị, na ha enweghịdị obere obi ike obodo.
Na n’oge ahụ, nna ya ukwu si n’ụlọ oriri na ọnụnụ pụta. Ịnụbiga mmanya ókè, ịma jijiji, anya gbachapụrụ agbachapụ, na-atụgharị ụfọdụ okwu ndị a na-enweghị ike ịghọta, ọ na-aga n’ụzọ ụgbọ ịnyịnya.
– Naanị lelee, kedu ka mkpụrụ a dị mpako si eji nnwere onwe nke ejiri ọbara ndị nna nna ya merie? Ọ dị mma, nna m ukwu bụ onye a nụrụma na onye ohi, mana kedu ka ndị ọzọ si eji nnwere onwe a? Naanị ịla n’iyi wee were mpako n’oge gara aga na uru ndị nna nna ha nwere, nke ha nwere oke onyinye dị ka m. Anyị bụ ehi, anyị nọgidere bụrụ ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ndị bara uru dị ka ndị nna nna anyị mere. Anyị bụ ehi, mana anyị ka nwere ike na-anya isi maka ọrụ ike na uru anyị bara taa.
Ehi na-amakụ nke ukwuu ma na-akwado olu ya maka agbu.
Na Belgrade, 1902.
Maka oru ngo “Radoje Domanović” onye nsụgharịrị bu Azodo Doyenne Ifeyinwa, 2021.